श्रद्धाञ्जलि दिन हेलिकोप्टर चढेर नेता पौडेल पर्वतको दुर्लुङमा - News site from Nepal
श्रद्धाञ्जलि दिन हेलिकोप्टर चढेर नेता पौडेल पर्वतको दुर्लुङमा
आइतवार, फाल्गुन २६, २०७५
पर्वत : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पर्वतको कुश्मा नगरपालिका ३ दुर्लुङका स्व. थमनसिंह गुरुङको परिवारलाई भेट गरेका छन्।
साविकको धौलागिरीका म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागि हुन सभापति शेरबहादुर देउवासँगै म्याग्दी आएका नेता पौडेलले आइतबार बिहान स्व. गुरुङको घरमै पुगेर उनको परिवारसँग भेटघाट गरेका हुन्।
श्रद्धाञ्जलि दिनका लागि पौडेल हेलिकोप्टरमार्फत दुर्लुङ पुगेका थिए। कांग्रेसका महाधिवेसन प्रतिनिधिसमेत रहेका गुरुङप्रति श्रद्धाजञ्लि व्यक्त गर्दै नेता पौडेलले स्वर्गीय गुरुङ मिलनसार र काँग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ता रहेको उल्लेख गरे।
थमनसिंहको निधनले पार्टीमा गम्भीर क्षति पुगेको बताउँदै उनले शोकको घडीमा परिवार, आफन्तजन र गाउलेहरूलाई धैर्य धारण गर्न अनुरोध गरे। दुर्लुङको श्रद्धाञ्जलि सभामा सकिएपछि नेता पौडेल बागलुङमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन बागलुङ पुगेका छन्। गुरुङको शुक्रबार राति ६४ वर्षको उमेरमा आफ्नै निवास दुर्लुङमा निधन भएको थियो।
पञ्चायतकालदेखि नै राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय गुरुङ तीन वर्षदेखि कलेजोको क्यान्सरका कारण बिरामी थिए। गत माघ २० गते चेकजाँचका लागि नर्भिक अस्पताल काठमाडौं पुग्दा अस्पतालले घरमै आराम गर्न सुझाव दिएपछि उनलाई अस्पतालबाट घर फर्काइएको थियो।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका ६ दिन बन्द, कर्मचारीमा ओमिक्रोन
‘तीन सातापछि संक्रमण मत्थर’
पर्वतको ठानामौलामा गोरु मार्न खोज्ने एक व्यक्ति पक्राउ
पर्वतमा कोरोना उच्च दरमा बढ्दै, सक्रिय संक्रमितको संख्या ३३७ पुग्यो
कानून नै बदलेर निर्वाचन सार्ने सरकारको तयारी
पर्वत बनौको डाडाखोरमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका भोलीदेखि एक हप्ताका लागि बन्द, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि संक्रमित
आज देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
पर्वत काँग्रेस सभापती सहितको टोलीद्धारा बाटुलेचौर कालीका मन्दिरलाई सहयोग